बिहेपछि प्रेम गर्ने कोही छ ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बिहेपछि प्रेम गर्ने कोही छ ?
२०७० माघ १८, शनिबार ०४:०७ गते
यो चिसो मौसममा पनि धेरै दिन गर्मी पैदा भयो । कारण, मन पराइएकाहरुले भटाभट बिहे गरे । माघ महिनामा मात्रै लगालग तीनवटीले आफ्नो बर छाने । दुईवटीको बिहेमा भोजसमेत खाएर आइयो । एउटीको बिहेमा जाने आँटै आएन । अनि एउटा गीत मनमनै आफैँ गुनगुनाएर बसेँ–
‘कसरी हेर्नु खै मन परेको मान्छेलाई अर्कैले सिन्दूर हालेको….।’
यो गीत पक्कै पनि मेरैजस्तो हालतका युवाहरुलाई हेरेर रचना गरेको हुनुपर्छ । उमेरले तीन दशक प्रवेश गरे पनि भनेजस्ती र रोजेजस्तीसँग घर बसाउन नसक्दा मन त्यसै पनि अमिलो भएर आउँछ । आशा लाग्दा तीनवटी थिए– तीनै जनाले आफ्नो बाटो तताएपछि यतिबेला मायाले छलेको छ, मन गलेको छ, मुटु जलेको छ ।
माया–पिरती भन्ने कुरा पनि अजीवकै हुँदोरहेछ । न माया गर्छु भनेर गर्न सकिँदोरहेछ, न ‘लभ’ पार्छु भनेर पर्दोरहेछ । देखासिकी गरेर ‘जबर्जस्ती’ ‘कोरस लभ’ पारिएको थियो । क्रमैसँग बिछोड हुन पुग्यो । यो कोरस लभको कहानी अलि लामै छ । सँगै पढ्ने ‘क्लासमेट’हरुसँगको प्रेम सम्हाली साध्यै थिएन । समूहका उनीहरुमध्ये एक जनाले मलाई मन पराउने, अर्कीलाई मैले मन पराउने र एक जनाचाहिँ माध्यम बन्ने गरेकी थिइन् । पछि सन्देशवाहक आफैँ एउटा उम्मेदवार भइन् । दुई जना त यसै भइहाले । हेर्दा सबैको नजरमा एक जना भए पनि म सबैको साझा प्रेमी बनेँ । साझा प्रेमीलाई जति समस्या अरुलाई पर्दोरहेनछ । पहिले त तीनै जना अति मिलनसार साथी थिए । मसँग सम्बन्ध गाँसिएपछि उनीहरुको सम्बन्ध चिसियो । उनीहरु तीनै जनाले मेरो मन बिगारे, समय बिगारे र पढाइसमेत बिगारे । मैले उनीहरुको केही बिगार गरिनँ । उनीहरुले नै मेरो भोक, निद्रा, चैन सबथोक लुटे । अन्तिममा ममात्र बाँकी रहेँ । उनीहरुले आ–आफ्नो बाटो तताए ।
अहिले म एक्लोे भएको छु । मसँग सबै छन्, कोही छैनन् । सबथोक छ, केही पनि छैन । सबैलाई चिसो बढेको बेलामा मलाई मात्र गर्मी हुन्छ । अरुलाई जे हुन्छ वा भइरहेको छ, मलाई ठीक उल्टो भएको छ । म उनीहरुको विवाह उत्सवमा रमिते भएको छु । कतै भान्से भएको छु, कतै भरिया भएको छु र कतै भत्केरू भएको छु । कतिलाई पर्खंदा–पर्खंंदै घरजम गरे, कतिले घरजम गरौँ भन्दा टेरिएन । अहिले त सँगै पढेका साथीहरुका छोरीहरु नै प्लस टु पढ्ने भैसके । आफ्नो भने हेर्दा र कुर्दा अझै लगनगाँठो जुर्न सकेको छैन । साथीहरुका छोराछोरी ‘एबोर्ड स्टडी’का लागि प्रक्रिया पूरा गर्दै गर्दा आफूचाहिँ बिहेको प्रक्रियाका लागि भौँतारिनु परिरहेको छ । अहिले नातागोता, इष्टमित्र, साथीसँगी सबैले भेट हुनासाथ बिहेको प्रसङ्ग उठाउँछन् । म अनेकानेक बहाना झिकेर अहिले केको हतार, सोच्दैछु भनेर पन्छाइदिन्छु । परिवारका सदस्यहरु त यतिसम्म वाक्क भइसके कि मात्र बिहे गरिदेओस्, जहाँकी ल्याए पनि हुन्छ । जसरी ल्याए पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ त दिक्क लागेर आउँछ– अनि कठोर भाषामा भनिदिने गर्छु– बिहेको कुरा मेरो निजात्मक कुरा हो, अलाई केको चासो ?
मेरो यस्ता अडबाङ्गो कुरा र छुद्र व्यवहारले गर्दा मेरा इष्टमित्रहरु मेरो बिहेको त के कुरा, निम्तोसमेत स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रेम नै गरेर बिहे गर्ने सोच पनि यही माघमा अन्त्य भैहाल्यो । अब प्रेम गरेरै हिँड्ने उमेर छैन, भए पनि उपयुक्त उम्मेदवारले विश्वास गर्नुप¥यो । भर्खरमात्र हो, एउटा कलेजकी भर्खरकी यौवनालाई पट्याउनु प¥यो भन्ठानेर गफ चुट्नमात्र के थालेको थिएँ, अङ्कलको साइनो जोडी हाली । अब अङ्कल नै भनिसकेपछि उसलाई के गफ दिएर पट्याउनु ? यसो यत्तिको सम्मलाई पाए बिहे गर्थें भनेर सोच बनायो । उही साथीकै छोरी पर्ने, भान्जी पर्ने र भतिजी पर्ने । अब भएन बिहे गरेर हरेकको मुखमा बुजो लगाइदिनु प¥यो भनेर कलेजतिर गयो, आफ्ना उमेर समूहका कोही बाँकी छैनन् ।
तैपनि, यसो प्रसङ्ग उठाउँदा आफ्नै उमेरका र आफूसरह पढेकासँग कुरा नमिल्ने । स्नातक पढेकाले डिग्री पढेको हेर्ने, डिग्री पढेकाले पिएचडी होल्डर नै ताक्ने । एक जना साथीको सहयोगमा स्टाफ नर्ससँग कुरा चलाएको कुन कलेजको डाक्टर हो ? कुन सरकारी कार्यालयको अधिकृत हो ? भनेर सोधिछन् । पत्रकार भनेको त, भो मैले अन्तर्वार्ता दिनु छैन भनेर पठाइछन् । आफूलाई यो माघभित्रै बिहे गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेपछि ‘म्यारिज ब्युरो’मा समेत फोन डायल गरियो । उताबाट जवाफ आयो, ‘फस्ट ह्यान्ड’ कि ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ भन्ने । के यो बिहेमा पनि फस्ट ह्यान्ड र सेकेन्ड ह्यान्ड भन्ने हुन्छ र ? भनेर सोधेको तपाईं पहिलो चोटि कि दोस्रो चोटि बिहे गर्न लाग्नु’भा भन्ने जवाफ आयो । पहिलो चोटि नै हो भनेपछि यहाँ त प्रायः दोस्रो चोटि बिहे गर्नेहरुका लागि परामर्श गरिन्छ भन्ने उत्तर आयो । त्यसपछि बिहेको चक्करमा कहाँ गइएन, कसलाई भनिएन, कस्ता–कस्ता छानिएन ? तर, लगन जुर्दै जुरेन ।
एक दिन बिहानै ज्योतिष बाजेकहाँ गएर हात हेरी मागेँ । ओ.. हो.. बाबुको त अडैया रहेछ भनियो । के भनेको होला ? बुझ्न सकिनँ । यो अडैया मलाई छँदै छैन भनेँ । होइन, अडैया दशा बाँकी रहेछ, शनिबार पीपलको बोटमा पानी चढाउनुपर्छ, घरमा पूजा लगाउनुपर्छ, व्रत बस्नुपर्छ भनेर सुझाए । धर्मकर्ममा मन नगएर हो भनूँ भने हरेक दिन मन्दिर देख्नेबित्तिकै टाउको निहुरिन्छ । देवीदेवताको प्रसाद पाएसम्म खाँदै आएको छु । कुन मन्दिरको माला लगाउन बाँकी होला ? अब फलाहार गर्ने बानी छैन त के गरुँ ? अब उपवास बस्ने चलनै छैन त म कसरी बसूँ ? ग्रहदशाको कुरा छाडौँ, मेरो बिहे हुन्छ कि हुँदैन ? भइहाले कुन पेसाकर्मीसँग हुन्छ वा कहिलेसम्म हुन्छ भनेर ज्योतिष बासँग सोधेपछि उनले यो वर्षसम्म बिहे नभए अरु पाँच वर्ष हुँदैन, गरे पनि अनिष्ट हुन्छ भने । म झनै पीडित बनेर फर्किएँ ।
यसो युवतीहरुको भीड देख्नै नहुने, नियालेर हेर्न मन लाग्ने । कलेज छुट्दा आँखा भीडबाट नहट्ने । फेसबुक चलाउँदा पनि अविवाहितहरुको प्रोफाइल हेर्न बाँकी नरहने । कति जनालाई त यो एकाङ्कीपन कहिले अन्त्य होला ? भनेर पनि सोधियो । तर, बुकिङ गर्न सकिएन । फेसबुकवाली एउटीले एक–दुई दिनपछि ‘डिसिजन’ दिन्छु भनेर आश्वासन दिएकी थिई । तर, सहिद दिवसकै दिन ‘जिउँदो सहिद’ बनाइदिई । किन यस्तो गरेकी भनेको सहिद दिवस मनाएको भनी । सहिद दिवसकै दिन उसले ‘इङ्गेजमेन्ट’ गरेपछि उसले फोटो ‘ट्याग’ गरेकी थिई । मन नपरे पनि ‘लाइक’ गरिदिनु परेको थियो ।
अचम्म लाग्दो कुरो त के भने स्वर्ण जन्मोत्सव मनाइसकेका ‘वृद्वोन्मुख योङ’हरुसँग भने ‘टिन एजर’को लभ पर्छ । म बिचरो अर्थात् मजस्ता बिचराहरुलाई भने अङ्कलको असुहाउँदो नाता जोडेर अन्याय गर्ने गर्छन् । आखिर हामीसँग के छैन र ! बूढाहरुसँग चाहिँ थप विशेषता के छ ? जहाँ हाम्रो पुस्ता सोझै अन्यायमा परिरहेको छ । एक जना तन्नेरी गुनासो गर्दैथिए, के हो यार ? आजकलका युवतीहरु ‘एजेड’हरुसँग आकर्षित हुन्छन् । हामीसँग तर्केर हिँड्छन् । एक जना भुक्तभोगी पाको व्यक्तिले भने– ‘यो युगै यस्तो हो भाइ, युवाहरुले धोका दिन्छन् र गोपनीयता भङ्ग गर्छन्, तर पाको मान्छे भनेको हरेक कुराले पाको हुन्छन् ।’ अब पाको कसरी हुने ? कपाल पाकेर पाको हुने हो भने १५ वर्षअघिदेखि नै कपाल फुल्न थालेको हो । लभ गरेर पाको भनूँ भने एउटीलाई पनि विश्वास दिलाउन सकिएन । उमेरको पाको भनूँ भने काकाहरुले च्यालेन्ज दिइसक्दा दुलही बनाउन सकिएन । अरुले घरवाली र बहारवालीको बखान गर्छन्, आफू भने यही पिरलोले मतवाली भइएको छ । गाउँघरतिर मूला भए काठ पसिसक्थ्यो भनेर व्यङ्ग्य कस्छन् । कसैकसैलाई त म पनि छोराछोरी स्कुल जान्छन् भनेर गफ दिन्छु । स्कुले नानीबाबुहरु अङ्कल तपाईंको छोराछोरी कुन स्कुलमा पढ्छन् ? भनेर सोध्छन् । मनमनै कस्तो लाज लाग्छ ! बिहे नै भाको छैन भन्नु भएन । अँ, मामाघरमै बसेर पढिरहेका छन्, भनिदिन्छु । यस्तो काल्पनिक गफले त सृष्टि चल्दोरहेनछ ।
बिहे गर्ने कुरा सोच्दासोच्दै थकान महसुस भएछ । कतिखेर निदाएछु, पत्तो भएन । गज्जबको सपना देखेछु– ‘डिभी परेर अमेरिका उडेको ।’ सपनाअनुसार त मेरो बिहे यही महिनामा नभए पनि फागुन महिनाभित्रमा हुनेमा म विश्वस्त छु । सपनामा एउटा फर्मुला तयार भएको छ । हुन त, यो फर्मुला नयाँचाहिँ होइन । यही फर्मुला प्रयोग गरेर कतिले घरजम गरिसकेका होलान् । अमेरिका जाने डिभी परेको खबर सुनेपछि मसँग बिहे गर्दिनँ भन्ने को निस्केला र ? बिहे गरिसकेपछि डिभी परिहालेछ भने अमेरिका गइहालिन्छ, नभए ‘आईएलटीएस’ गरेर अस्ट्रेलिया उडिन्छ । पहिले बिहे त होस् । मैले बिहे गर्ने केटीको न्यूनतम योग्यता मलाई माया गर्ने भए पुग्छ । उत्तरआधुनिक शैलीको बिहे एउटासँग, माया एउटासँग गर्ने केटी मलाई चाहिएको होइन ।
पूर्वप्रेमिकाहरुले त मलाई यसो पनि भने– ‘यो प्रेम र विवाह अलग–अलग कुरा हो । जब प्रेम विवाहमा परिणत हुन्छ, त्यहाँ प्रेम रहँदैन । त्यसैले म हिजो, आज र भोलि प्रेम तपाईंलाई नै गर्छु । तर, विवाह भने अर्कैसँग गर्छु ।’ यस्तो अवस्था नआओस् । बरू, प्रेम विवाहपछि नै गरे पनि हुन्छ । अहिले भने मलाई अर्थात्, मजस्तै युवालाई योग्य उम्मेदवार चाहिएको छ । कोही छ कि ?